गायक शिव देवकोटालाई मनपर्यो कोमल ओली ! जम्ला त जोडी ? (भिडियोसहित) – Aajako Khabar: आजै अनि ताजै
काठमाडौँ, ६ असोज, जीवन चल्न जसरी पारिवारिक वातावरण र एक अर्काको साथ÷सहयोग चाहिन्छ त्यसैगरी गीत चल्न पनि गायक र गायिकाको स्वर म्याच गर्नु जरुरी हुन्छ । गीतका शब्द, संगीत, एरेन्ज र म्यूजिक भिडियोको पार्ट पनि उत्तिकै महत्वपूर्ण हुन्छ । चलेका कलाकारसँग नयाँ कलाकारको जोडी बाँधिएसँगै फुस्किने क्रम पनि उत्तिनै हुन्छ । केही केही बाहेक धेरैको स्वरमा तादत्म्य नमिल्दा गीत खल्लो त बन्छ नै त्यसले कलाकारकै भविष्यमा आघात पार्दछ । गीत पुराना र स्थापित कलाकारसँग गाउँदैमा हिट र व्यवसायिक हुने पनि होइन ।
गायक शिवप्रसाद देवकोटाले पनि पहिलो पटक स्थापित र चर्चित गायिका कोमल ओलीसँग गीत गाएका छन् । पहिलो गीत भएकोले देवकोटा नै कोमल ओलीसँग आफ्नो जोडी जम्नेमा निर्धक्क भने छैनन् । ‘यो दर्शकले मूल्याङ्कन गर्ने कुरा हो’ उनी भन्छन् । गायक ओलीसँग सौहार्दपूर्ण सम्बन्ध भएको र गीत गाउन पनि रमाइलो भएको उनको अनुभव छ । ‘उहाँसँगको गायन सहकार्यले थप निरन्तरता पाउने छ’ देवकोटा भन्छन् । लोकगीतमै रमाउन चाहने देवकोटाको यो पहिलो प्रयासलाई दर्शक स्रोताले मन पराउनेमा उनी आशावादी भने छन् । गायक देवकोटाले यसअघि पनि लोकगीत, लोकदोहोरी, राष्ट्रिय भावनाले ओतप्रोत, समसामयिक र तीजगीतमा आफ्नो स्वरलाई दरिलो बनाइसकेका छन् ।
निक्कै निखारिएको स्वर छ गायक देवकोटाको । उमेरले पनि पचास कटेका देवकोटाको स्वरमा म्याचुरिटी देखिन्छ । कोमल ओलीसँग गाउँदा उनको स्वरलाई नयाँ वा नमिलेको भन्नु पर्ने अवस्था छैन । त्यसैले पनि यो गीतलाई धेरै दर्शक, स्रोतले मनपराउने अपेक्षा गर्न सकिन्छ । रमाइलो खालका लोकदोहोरी गीत सुन्न इच्छा राख्ने दर्शक, स्रोतालाई त यो राम्रो खुराक नै बन्नेछ । तर जोडी जम्ने वा नजम्ने भन्ने दर्शक, स्रोताको हातमा छ ।
‘सलल बगिन् नारायणी…’ बोलको गीत गायक देवकोटाले पहिलो पटक कोमल ओलीसँग गाएका हुन् । देवकोटाकै शब्द र संगीतमा बनेको यो गीतको म्यूजिक भिडियो पनि बनिसकेको छ । म्यूजिक नेपालको युट्युब च्यानलमार्फत हालिएको यो गीत छोटो समयमै दर्शक, स्रोताको मन जित्दै गएको छ ।
गीतको म्यूजिक भिडियोमा सञ्जिव ठकुरी र अस्मिता राईको अभिनय हेर्न पाइन्छ । विक्रम कार्कीले भिडियोका दृश्य खिचेका हुन् भने त्यसलाई अमन बडुले सम्पादन गरेका हुन् ।
हेर्नुहोस् यो मिठो गीतको भिडियोः
Tagged कोमल ओली गीत म्यूजिक भिडियो संगीत
Tags: कोमल ओली, गीत, म्यूजिक भिडियो, संगीत